Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247620 times)
« Reply #260 on: June 18, 2011, 04:05:36 PM »
" ရိုး ရိုး လေး ပဲ တွေး ပါ "
ဆရာမသည် ပီတာလေးကိုျေကာင်းအုပ်ကြီး၏ ရုံးခန်းသို့ခေါ်လာသည် ။
" ဆရာကြီး..ပီတာလေးကို ပထမတန်းမှာ မထားသင့်ပါဘူး....အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် သူ အများကြီး သိနေတယ်ရှင့်
သူ့ ကို တတိယတန်းမှာ တက်ဘို့ကျမ အဆိုပြုချင်ပါတယ်..."
" ကောင်းပြီလေ...ဒါပေမဲ့..အတန်းကျော်တက်မယ့် ကလေးဟာ ဆရာမပြောသလို တော်ရဲ့ လား ဆိုတာတော့ ကျနော်
ကိုယ်တိုင် စစ်မေးချင်တယ်..ကိုင်း..မောင်ပီတာ ..နှစ် နဲ့နှစ် မြှောက်ရင် ဘယ်လောက် ရသလဲကွဲ့ .."
" လေး ပါ ဆရာကြီး.."
" မှန်တယ်...သုံးနဲ့ သုံး မြှောက်ရင်ကော.."
" ကိုး ပါဆရာကြီး.."
" မှန်တယ်..ငါးအမြှောက် ငါး ဆိုရင် ကော.."
" ၂၅ ပါ ဆရာကြီး.."
" မှန်တယ်..ဆရာမ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ကလေးဟာ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် အသိဉာဏ် ဖွံ့ ဖြိုးနေတာပဲ..သုံးတန်းကို တင်
ပေးဘို့ကျနော် မကန့် ကွက်ပါဘူး.."
ဆရာကြီး၏ အခန်းတွင် အရင်ရောက်နှင့်နေသော သုံးတန်း အတန်းပိုင်ဆရာမက ၀င်ပြောသည် ။
" ဆရာကြီး...ကျမကိုလဲ မေးခွန်း မေးခွင့်ပြုပါ....မောင်ပီတာ ..ဆရာမကို ပြောစမ်းကွယ်... နွားမမှာ လေးခု ရှိတယ်..
မိန်းမမှာ နှစ်ခုတည်း ရှိတယ်...အဲ့ဒါ ဘာကို ပြောတာလဲကွယ့်.."
ချာတိတ် အနည်းငယ် စဉ်းစားပြီး ဖြေသည် ။
" မှန်တယ်...မောင်ပီတာ...၊ မင်း ဘောင်းဘီထဲမှာ နှစ်လုံး...ဆရာမဆီမှာတော့ တစ်လုံးမှ မရှိဘူး...အဲ့ဒါ ဘာကို
ချာတိတ် ချက်ချင်း စဉ်းစားပြီးဖြေသည် ။
" ကလေးဟာ ..တကယ့်ကိုပဲ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် တော်မှန်း ကျမ သိပါပြီ..၊ သူ့ ကို သုံးတန်းကို တစ်ခါတည်း
တင်ပေးလိုက်ဘို့သဘောတူပါတယ်.."
ဆရာကြီး ကမန်းကတန်း ၀င်ပြောသည် ။
" နေဦး..နေဦး...သူ့ ကို ငါးတန်းကို တစ်ခါတည်း တင်ပေးလိုက်ရအောင်....ဆရာမမေးတဲ့ နောက်ဆုံး မေးခွန်း နှစ်ခုကို
ကျနော်တောင် မှန်အောင် မဖြေနိုင်ဘူးဗျ..အဟင်း..ဟင်း.."
ကဲ...ခင်ဗျားတို့ ကော...ဘယ်လိုများ ဖြေလိုက်သလဲ မသိဘူး...ပီတာလေး ဖြေတာက
ပထမ မေးခွန်းရဲ့အဖြေ.....ခြေထောက်
ဒုတိယမေးခွန်းရဲ့ အဖြေ.....ဘောင်းဘီ အိပ်ထောင်...ပါတဲ့ခင်ဗျာ..
« Last Edit: June 20, 2011, 09:31:20 AM by tunaye2011 »
« Reply #261 on: June 20, 2011, 11:12:14 AM »
" မ ယုံ ရင် စမ်း ကြည့် "
ကိုထိန်ဝင်း ပြောနေကျ စကားဖြစ်သည် ။
" မနက် အိပ်ရာက ထကတည်းက ခေါင်းကိုက်နေတယ်..
လက်တွေတုန်နေတယ်..အာခေါင်တွေ ခြောက်နေတယ် ဆိုရင်
« Reply #262 on: June 20, 2011, 11:25:09 AM »
" လူ ပျောက် သွား သော် လည်း "
နေ့ တိုင်းလိုလို ကိုထိန်ဝင်းကို မိန်းမဖြစ်သူ အပြစ်ရှာသည် ။ တစ်ချိန်လုံး ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နှင့်
နားငြီးအောင် ပြောသည် ။ ကိုထိန်ဝင်း နေစရာမရှိတော့...။ သည်းမခံနိုင်တော့သည်နှင့် အောက်လမ်း
အတတ်ပညာ တတ်မြောက်သည်ဟု နာမည်ကြီးသော ဒေါ်စိန်ပုထံ အကူအညီ တောင်းသည် ။ ဆရာမ
ကြီး ဒေါ်စိန်ပုက ဆေးပုလင်း လှမ်းပေးပြီး ကိုထိန်ဝင်းကို ပြောသည် ။
" ပုလင်းထဲက အရည်ကို နင့်မိန်းမ သောက်ပစေ..သောက်လိုက်တာနဲ့ဒင်း အိမ်ထဲက ပျောက်သွားစေ
နောက်တစ်နေ့ တွင် ကိုထိန်ဝင်း အောက်လမ်းဆရာမကြီး၏ အိမ်သို့အပြေးအလွှား ရောက်လာပြီး အော်
" ခင်ဗျားကြီး ဘယ်လို လုပ်လိုက်တာလဲ ဗျ.."
" ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ..နင့်မိန်းမ မပျောက်သွားဘူးလား...."
" အဲ့ဒါဆို ငါ စီရင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်တာပေါ့ဟဲ့.."
« Reply #263 on: June 20, 2011, 01:30:16 PM »
" ဒီ လောက် တော့ အ ပျော့ ပေါ့ "
မယ်စကြာဝဋ္ဌာပြိုင်ပွဲဝင် အင်္ဂလိပ်..ပြင်သစ် နှင့် ရုရှား အမျိုးသမီး ကို မေးခွန်းမေးသည် ။
" ဆိုကြပါစို့ ...လူသူမရောက်တဲ့ ကျွန်းတစ်ကျွန်းကို ယောင်္ကျား အယောက် ၂၀ နဲ့ခင်ဗျား
အင်္ဂလိပ်မ....." ကျမကို အကာအကွယ်ပေးဘို့ဘုရားသခင်ကို ရှိခိုး ဆုတောင်းမယ်..."
ပြင်သစ်မ..... " အားအကောင်းဆုံးလူကို ကျမ ရွေးချယ်မယ်...သူက ကျမကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်.."
ရုရှားမ........ " မေးခွန်းကို ကျမ နားလည်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာ ရှိနေလို့ လဲရှင့်.."
« Reply #264 on: June 20, 2011, 01:40:22 PM »
" ကြည့် ပြီး သား "
သူဌေးကတော် ..အပေါ်ဝတ်ရုံကို ခြုံလိုက်ရုံ ရှိသေး...အခန်းထဲသို့မာလီ ၀င်လာသည် ။
" ဟဲ့..တံခါးခေါက်ပြီးမှ..၀င်ပါလား..၊ ငါ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ အ၀တ်အစား မရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..":
" စိတ်မပူပါနဲ့ခင်ဗျာ...ကျနော် မ၀င်ခင် တံခါးသော့ပေါက်က ချောင်းကြည့်ပြီးသားပါ.."
" သ မီး နဲ့အ မေ "
" သမီးနဲ့့အမေလို့ သာ ပြောရတယ်...တကယ်တန်းကြည့်လိုက်ရင် ညီအစ်မလား အောက်မေ့ရတယ်.."
" ဘာလဲ...အမေလုပ်တဲ့သူ ဒီလောက်တောင် အရွယ်တင်လို့ လား..."
" မဟုတ်ဘူး..သမီးက အိုစာ လို့ ..."
« Last Edit: June 21, 2011, 12:18:53 PM by tunaye2011 »
« Reply #265 on: June 20, 2011, 01:49:14 PM »
" အ ကြံ ကောင်း "
ကိုစိုးပိုင်က ၄င်း၏ မိတ်ဆွေများကို ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားတို့မိန်းမယူရင် ၀ တဲ့ မိန်းမကိုယူဗျ..၊ စိတ်ကူးမလွဲကြနဲ့ ..
ဆောင်းမှာ ခင်ဗျားကို အနွေးဓါတ် ကောင်းကောင်းပေးမယ်..အဲ
" စား မှာ သာ စား စမ်း ပါ "
လင်မယားနှစ်ယောက် နေ့ လည်စာ စားနေကြသည် ။ မိန်းမဖြစ်သူ ဘာမှ မစားသဖြင့်
ယောင်္ကျားက မေးသည် ။
" မင်း..ဘာမှ မစားပါလား...ဘာဖြစ်လို့ လဲ.."
" ဘာလဲ...ဒီအစာတွေ စားပြီး ကျမကို အဆီတွေဝင်းနေတဲ့ နွားမကြီးလို ဖြစ်လာတာ
" စားမှာသာ စားစမ်းပါကွာ...နွားပိန်မ လဲ ကြည့်ရတာ မလှပါဘူးကွ.."
« Reply #266 on: June 20, 2011, 02:43:55 PM »
" ညံ့ လိုက် တဲ့ ယော င်္ကျား "
မော်စကိုမြို့ ရှိ ဗဟိုလူမှူဖူလုံရေးရုံးသို့ပင်စင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရန် လူကြီးတစ်ယောက်ေ၇ာက်လာသည် ။
မိမိ၏ အလှည့်ရောက်၍ အခန်းထဲ ၀င်သွားသော အခါ သားသားနားနား ၀တ်ဆင်ထားပြီး သဘောကောင်း
ပုံရသည့် အသက် ၃၀ အရွယ်ခန့်အမျိုးသမီး အရာရှိ ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ ရသည် ။
လာရင်းကိစ္စကို သူမအား ပြောပြသည့်အခါ အရာရှိအမျိုးသမီးသည် လိုအပ်သည်များကို အလျှင်အမြန်ပင်
ဆောင်ရွက်ပေးသည် ။ ပုံစံစာရွက်များကို ဖြည့်ခိုင်းသည် ။ ဖြစ်ချင်တော့ လူကြီးသည် အဓိကဖြစ်သည့် မိမိ
၏ မွေးသက္ကရာဇ် အထောက်အထားပါသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို မေ့လာသည် ။ အမျိုးသမီးက စာနာပြုံး
ပြုံးပြီး လူကြီးအား ရှပ်အင်္ကျီချွတ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ လူကြီး ချွတ်ပြသည် ။
" ဦးရဲ့ရင်ဘတ်က အမွှေးတွေ ဖြူနေတာကို ကြည့်ရုံနဲ့ ပဲ ဦးဟာ အသက် ၆၀ ပြည့်နေပြီဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါ
တယ်...ဒါကြောင့် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် မပါပဲနဲ့ လဲ သက်ပြည့်ပင်စင် လက်မှတ်ကို ကျမ ထုတ်ပေးလိုက်ပါ့
ကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီး လူကြီး အိမ်သို့ ပြန်လာသည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် ရုံးခန်းက အဖြစ်အပျက်ကို
မိန်းမအား ပြောပြသည် ။ မိန်းမက မကျေမနပ် ပြောသည် ။
" ရှင် အင်မတန် ညံ့တဲ့လူ.. အင်္ကျီအပြင် တစ်ကိုယ်လုံးပါ ချွတ်ပြလိုက်ပါလား...အဲ့ဒါဆိုရင် မသန်မစွမ်း ဒုက္ခိတ
( မှတ်ချက်..။ ရုရှားနိုင်ငံတွင် မသန်မစွမ်း ဒုက္ခိတပင်စင်သည် သက်ပြည့်ပင်စင်ထက် ပိုက်ဆံပိုရသည် ..)
« Reply #267 on: June 20, 2011, 03:34:08 PM »
" အ ဖေ ဖြစ် မဲ့ ကို ချူ ချာ "
ကိုချူချာသည် အလွန် အရုပ်ဆိုးသူ ဖြစ်သည် ။ မိမိ အရုပ်ဆိုးမှန်းလည်း ၄င်းကိုယ်တိုင်သိ၏ ။ ထို့ ကြောင့်
ကိုချူချာ မှန် ကြည့် ခဲ သည် ။ တစ်နေ့ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည့် ဇနီးသည်က ကိုချူချာ၏ မျက်နှာကို သေသေ
ချာချာ ကြည့်ပြီးပြောသည် ။
" ကျမတို့ ဆီမှာ သားသမီးရတနာ ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် ၀မ်းတော့ သာပါရဲ့ ....ဒါပေမဲ့..ကလေးဟာ ရှင်နဲ့ တူ
ကိုချူချာ အသံမာမာဖြင့် ပြန်ပြောသည် ။
" ကလေးဟာ..ငါနဲ့ တူနေရင် စိတ်မကောင်းစရာပေမဲ့ ဖြေသိမ့်လို့ ရသေးတယ်...အေး...ငါနဲ့ မတူလို့ ကတော့
မင်း ဒုက္ခလှလှ တွေ့ ပြီမှတ်ပေတော့...."
« Reply #268 on: June 21, 2011, 12:52:33 PM »
" ရှား လော့ ဟုမ်း "
ရှားလော့ဟုမ်း အိပ်ရာမှ နိုးသောအခါ ဒေါက်တာ ၀ပ်ဆင် ကို ပြောသည် ။
" ၀ပ်ဆင်..ခင်ဗျား..တစ်ညလုံး ရာဂစိတ်တွေ ကြွစေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို
ဗွီဒီယူနဲ့ကြည့်တယ်ထင်တယ်.."
" ခင်ဗျား ဘယ်လိုလုပ် သိသလဲ.."
" တစ်အချက်...ခင်ဗျားရဲ့ မျက်လုံးတွေ နီနေတယ်.."
" ကျုပ်ဆီမှာ..အဲ့ဒီ့ ကားမျိုးကလွဲပြီး ဘာမှ မရှိဘူးလေ.."
" လက် မ ရှိ ရင် ကောင်း မယ်. "
လူငယ်တစ်ယောက် စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာသည် ။
" ဒေါက်တာ..ကျနော့်ကို ကယ်ပါ ခင်ဗျာ..
ညတိုင်းညတိုင်း အိပ်မက် တစ်ခုတည်းကိုပဲ မက်နေတယ်.. ကျနော် အိပ်ရာထဲမှာ လှဲနေတယ်.
မိန်းမချော ငါးယောက် ကျနော့်ကို ၀ိုင်းလာပြီး ကျနော့်ကိုပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်ဖို့ 
" အဲ့ဒီတော့ ခင်ဗျား ဘာလုပ်သလဲ.."
" ဆရာ ယုံချင်မှ ယုံမယ်...ကျနော် သူတို့ ကို တွန်းပစ်တယ်ခင်ဗျ.."
" သဘောပေါက်ပြီ...ကျနော် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ.."
" ကျနော့် လက်နှစ်ဖက်ကို ဖြတ်ပေးပါဆရာရယ်..."
« Reply #269 on: June 21, 2011, 01:11:36 PM »
" အ ဓိ ပ္ပါယ် ဖွင့် ဆို ချက် "
အတန်းထဲတွင် ဆရာမက မေးသည် ။
" ကလေးတို့ ရေ...လူတွေရဲ့ စိတ်ကို အကြွဆုံး ဖြစ်စေတဲ့ ဂဏန်းဟာ ဘာဖြစ်မယ် ထင်သလဲကွယ်.."
ပီတာလေး.ချက်ချင်း ထဖြေသည် ။
" ၂၁၅၉၃ "
ဆရာမက အံ့သြစွာဖြင့် ပြန်မေးသည် ။
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ...ဘယ်လိုအဓိပ္ပပါယ်လဲကွယ့်.."
" တကယ်လို့လူ ၂ ယောက်ဟာ ၁ ခုတည်းကို အတူတူ တွေးကြတယ်ဆိုရင်
၅ ပတ်အကြာမှာ နောက် ၉ လ အတွင်း သူတို့၃ ယောက်ဖြစ်လာကြမယ် ဆိုတာ